Keylor Navas oo si ula kac ah qarankiisa guuldarro ugu hoggaamiyay & Xiriirka kubadda cagta Costa Rica oo bannaanka soo dhigay sababta ka dambeysa! – Gool FM
Keylor Navas oo si ula kac ah qarankiisa guuldarro ugu hoggaamiyay & Xiriirka kubadda cagta Costa Rica oo bannaanka soo dhigay sababta ka dambeysa!
Haaruun March 16, 2021
(San José) 16 Maarso 2021. Goolhayaha kooxda Paris Saint-Germain ee Keylor Navas ayaa dhexda ka taagan eedeyn kulul oo kaga imaaneysa xiriirka kubadda cagta ee dalka Costa Rica.
Navas oo ay wehliyaan Bryan Ruiz iyo Celso Borges ayaa lagu soo eedeeyay inay ku talo galeen inay qaataan guuldarrooyin xiriir ah si shaqada tababarennimo looga ceyriyo Jorge Luis Pinto oo ahaa macallinka xulkaas.
Madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta dalka Costa Rica oo loo soo gaabiyay FECODA, ninka la yiraahdo Eduardo Li ayaa ku eedeeyay in saddexdaas ciyaaryahan ay ogaayeen qodob ku jiray heshiiskii kaasoo ahaa in Luis Pinto la ciyrin doono haddii ay saddex kulan oo xiriir ah guuldarreystaan.
“Ciyaartoydu waa ay ogaayeen qodobka,” ayuu yiri Eduardo Li, waxaana uu intaas ku daray “Keylor Navas ayaa ahaa kii yiri ‘aan guuldarreysanno saddexda kulan’.
Dacwada kiiskan ayaa weli socda, iyadoo Jorge Luis Pinto qudhiisa uu ka soo muuqan doona maxkamadda si su’aalo loo weydiiyo 16-ka bisha Maarso.
Karim Benzema: "Haddii uu Haaland imaanayo Real Madrid..."
Zlatan Ibrahimovic oo dib ugu soo laabtay xulka qaranka Sweden